Guddoomiyaha G/Banaadir oo xariga ka jaray dib u dhis lagu sameeyay xarunta dagmada X/weyne – idalenews.com
Guddoomiyaha G/Banaadir oo xariga ka jaray dib u dhis lagu sameeyay xarunta dagmada X/weyne
Munaasabad xariga looga jarayay dib u dhis lagu sameeyay xarunta maamulka dagmada X/weyne ayna ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay dagmada X/weyne ee magaalada Muqdisho.
Munaasabaddan oo ay ka qeyb galeen maamulka degmada X/weyne guddoomiyaha Gobolka Banaadir, kuxigeenka duqa magaalada Muqdisho, wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta, guddoomiyeyaasha dagmooyinka Hodan, Warta Nabada, Xamar Jabab, haween iyo marti sharaf kale.
Mas’uuliyiinta ayaa waxa xarunta degmada X/weyne kusoo dhoweeyay Ururada haweenka dagmooyinka oo xirnaa dhar leh midabka calanka jamhuuriyadda Soomaaliya, dharka hidaha iyo dhaqanka iyo haween kasocday laamaha ay kakoobantahay degmadaasi X/weyne.
Guddoomiyaha gobolka Banaaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” oo xariga ka jaray dib u dhiska lagu sameeyay xarunta dagmada X/weyne, waxaana xarig jarista kadib hadal ka jeediyay guddoomiyaha dagmadaasi.
C/llaahi Ibraahim Sahal “Gardhuub” oo la hadlay saxaafadda ayaa sheeegay in dadaal ay u galeen sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahaayeen xarunta dagmada waxa uunta xusay in haatan lagu guuleystay sidii dib loogu dhisi lahaa.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” oo ka hadlay munaasabada ayaa tilmaamay in la dar dar galiyo dhismaha xarumaha dowladda si dib loogu soo celiyo bilicdii ay laheyd magaalada Muqdisho.
Tarsan ayaa intaasi ku daray in laga maarmaam ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay bixiyaan shanshuurta si dib loogu soo celiyo adeegyada aas aasiga u ah bulshada.
Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda Maaliyadda iyo Qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Rashiid Sheekh Daahir waxa uuna qeexay in isbadal dhan kasta ah uu ku tilaabaday wadanka isagoona intaasi raaciyay in shacabka ay go’aansadeen sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahaayeen dalkooda.
Dhismahan lagu sameeyay xarunta degmada X/weyne ayaa waxay kamid tahay dadaalka balaaran ee ay dowladda Soomaaliya dib ugu dhiseyso xarumaha bulshada lagahago laguna baraarujiyo.
Marwada R/wasaaraha oo deeq gaarsiiyay barakacayaasha dagan dagmada Wadajir
Wasiirada Arimaha Dibada Fowziyo Yuusuf oo ka hadashay xariga Wariye Koronto